Waa kuma saxiixa cusub ee Arsenal Granit Xhaka?…(Halkan ka aqriso wax kasta oo aad uga baahan tahay)+SAWIRRO – Gool FM
Waa kuma saxiixa cusub ee Arsenal Granit Xhaka?…(Halkan ka aqriso wax kasta oo aad uga baahan tahay)+SAWIRRO
(London) 21 Maajo 2016. Xiddiga qadka dhexe ee naadiga Borussia Monchengladbach Granit Xhaka ayaa ku dhawaad 30-milyan ugu soo dhaqaaqay kooxda Arsenal kaddib afar sano uu ka soo ciyaarayay horyaalka Bundesliga.
Weli Arsenal ma aysan shaacin heshiiska laacibkan laakiin sawirro qarsoodi loo faafiyay iyadoo uu laacibku xiran yahay maaliyadda Arsenal waliba mida cusub oo ay ku ciyaari doonaan kal ciyaareedka soo socda ayaa caddeyn kaaga filan in laacibku yahay mid ka tirsan xiddigaha Gunners.
Lambarkii ugu horreeyay uu xirto waayihiisa xirfalenimo wuxuu ahaa NO. 34, waana Lambar uu u qaato koox kasta oo uu ku biiro, Toloow Arsenal isla lambarkaa miyuu u xiran doonaa? Haa oo way u badan tahay Coquelin ayaa iminka wata lambarkaas laakiin waxay u badan tahay in laga qaadi doono loona xiri doono NO. 8.
Waxaa kuu diyaariyay: Cabdisamed Maxamed Xasan (Black Yare).blackyare1@hotmial.com.Gool FM.
GOOGOOSKA: Paris Saint Germain vs Olympique Marseille 2-4 (Couppe de France final)